आएकामध्ये थोरैको मात्र स्वास्थ्य जाँच गरिएकोमा १२ जनामा आरडीटी पोजिटिभ देखिएको छ । – Sandesh Munch
आएकामध्ये थोरैको मात्र स्वास्थ्य जाँच गरिएकोमा १२ जनामा आरडीटी पोजिटिभ देखिएको छ ।
May 22, 2020 224
धनगढी — धनगढीको सीमानाका गौरीफन्टाबाट बिहीबार राति अबेरसम्म अढाई हजार जना भित्रिए पनि उनीहरूमध्ये थोरैको मात्र कोरोना जाँच गरिएको छ । नाकामा भिड व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परेपछि बाँकीलाई ज्वराे नापेका भरमा प्रवेश गराइयो ।नेपाल भित्रिएका २ हजार ४ सय ९८ जनामध्ये ७ सय ७३ जनाको मात्रै आरडीटी गरिएको हो । अन्यमा ज्वरो भए/नभएको मात्र नापियो । आरडीटी गरिएका मध्ये १२ जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ । उनीहरूलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ ।
बुधबारझैं बिहीबार पनि राति ११ बजेसम्म गौरीफन्टा आइपुगेकाहरूलाई भित्र्याउन सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, कैलाली जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी खटिएका थिए । आएका मध्ये ८ सय ८ जनालाई धनगढीको त्रिनगरस्थित नवदुर्गा माविको भवनमा राखिएको छ । अन्यलाई प्रदेश सरकारले बस व्यवस्था गरेर सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको सशस्त्र प्रहरीको धनगढीस्थित ३४ नम्बर गणका एसपी कमल तिमिल्सिनाले बताए ।
किट अभावले सबैको परीक्षण गर्न नसकिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘किट छैन, थप माग गर्दै छौं,’ निर्देशनालयका स्वास्थ्य निरीक्षक हेमराज जोशीले भने, ‘अवस्था भयावह हुने देखियो ।’ सीमामा आउनेहरूको संख्या पूर्वानुमान नै गर्न नसकिने अवस्था आएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
भारतबाट आउनेहरूलाई सीमामा व्यवस्थापन गर्ने हम्मे पर्ने अवस्था आएको सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ । ‘हरेक दिन मध्यरातसम्म आउनेक्रम जारी हुन थाल्यो,’ एसपी तिमिल्सिना भन्छन्, ‘भारतीय पक्षले नेपालीहरूलाई सीमामा ल्याएर छोड्दिन थाले ।’
भारतमा रहेकाहरू नेपाल भित्रिने अनुमान हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापनको तयारी नहुनु स्थानीय र प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनको तयारी गर्न यसबीचमा पर्याप्त समय थियो,’ मानवअधिकार उच्चस्तरीय अनुमन समितिका सदस्य खडकराज जोशी भन्छन्, ‘किटको जोहो गर्नुपर्ने, बोर्डरमै ठूला क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउन पनि सकिन्थ्यो होला ।’ भारतमा बस्दै आएका नेपालीहरू यति बेला दोहोरो दबाबमा छन् । खान–बस्नको समस्या बढेको, यसै बेला सीमा विवाद बल्झिएको र त्यहाँका नेपालीलाई भारतीय पक्षले अनेक बहानामा चेपुवामा पार्ने डर भएकाले उनीहरूलाई नेपाल फर्किन हतारो भइरहेको जोशीले बताए ।
कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाका स्थानीयलाई सीमाबाट लिएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको सशस्त्रका एसपी तिमिल्सिनाले बताए । बुधबार रातिसम्म साढे ८ सय जना आएका थिए । बिहीबार आएकाहरूमध्ये धेरै संख्या सुदूरपश्चिमकै छ । उनीहरूमध्ये तीन सय हाराहारी अन्य प्रदेशका छन् ।
Prev४८ घण्टामा अन्तरिक्षबाट पृथ्वीतर्फ ठूलो खतरा आउँदै, के भन्छ नासा ?
Nextगुगलले पनि राख्यो नेपालको नयाँ क्षेत्रफल
‘जीवित दाहिने सं’ख बिल्कुलै बेवास्ता नगरी एकपटक तस्बिर छोएर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस्
नेपाली भूमि अतिक्रमणमा भारतलाई चीनको समर्थन ?
मन मोहित हेर्नुहोस एक झलक काठमाडौं महानगरको झिलिमिली कार्यक्रम : ७५ लाख खर्चेर बत्ती जोडिँदै
कोरोनाको अर्को नयाँ र खतरनाक लक्षण देखियो, डब्लुएचओको चेतावनी
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83628)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27374)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11401)
फेरी नेपालमा आइसोलेशनमा राखिएका २२ बर्षीय युवकको मृ-त्यु (9608)